Remangwana reSales Automation - Vhidhiyo Bots - NewGenApps
chatbot, Chatbots, Natural Language Processing, NLP, Sales, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Iyo ramangwana reSales Automation - Vhidhiyo Bhoti
Chatbots uye chakagadzirwa njere vakatora pamusoro pe bhizimisi nyika zvakanaka kwazvo uye nekukurumidza. Iyi buzz iri kuenda kune imwe nhanho nyowani neyavo kuwedzera kune yekutengesa maitiro. The kushandisa michina yekutengesa inofanirwa kunge iri yekutaura kweguta kune 2018. Uye mune ramangwana, ichave ichigadziridzwa nemaitiro matsva uye kuita. Izvo zvinobatsirawo mukuvandudza mashandiro etimu rekutengesa pamwe nepfupi kutenderera kwekutengesa, mashoma mashandiro emabasa uye inobatsira mukugadzira zvimwe zvinotungamira.
Zvinogona kunzwika sekunze kune vanhu vazhinji asi bots vakakwanisa kutora maitiro ekutengesa kune imwe nhanho.
Zvinopfuura makumi mashanu muzana ezviitiko zvekutengesa zvinopedzwa neatomatiki maturusi kana Software. Izvi zvese nekuda kwe chakagadzirwa njere izvo zvakakwanisa kutora kutengesa kune imwe nhanho. Nekudaro, hapana chikonzero chekushushikana nezve mabasa ekutengesa nekuda kwe kushandisa michina. Paive nenguva iyo chete 40% yenguva yakaiswa mukutengesa chaiko uye zvimwe mune risiri remari basa. Izvi kushandisa michina ndeyekubatsira kubvisa zvinodikanwa zve60% yenguva uye wozoisa mari mukutengesa.
Nekudaro, basa rekutengesa rakawanda kupfuura iyo 50% iyo inogadzirwa. Izvi zviri pano kuita kuti basa rinyatsoshanda uye rakanakira mutengesi rep. Kana chero chinhu, mutengesi wekutengesa anogona kutarisisa pane rimwe basa panguva Software ari kuita mabasa asinganyanyi kukosha. Vanogona kuongorora nyore basa nerubatsiro rwe data. Iyi data yakachengetwa inogona kubatsira mukuwana nzwisiso uye wobva waita mushandirapamwe wakabudirira saizvozvo.
Nekudaro, iro ramangwana rekutengesa rep haidi chero kubatwa kwespredishiti kana mafomu asi zvakanyanya kutora zvinotungamira zvine hungwaru uye kuronga mushandirapamwe zvine hungwaru. Iko hakuna kudikanwa kwekufonera munhu mumwe nemumwe pachinyorwa chete kuti uve nechokwadi chekuti vanogona kuve vechokwadi tarisiro. Mutengesi anotengesa anogona kupa yavo nguva kune zvirinani zviitiko kuseri kwechiitiko uye rega mabhoti agadzirise basa kusimudzira kunaka kwebasa.
Takaona uye takashandisa chatbots mugore ra 2018. Havana chimwe chinhu kunze kwekubudirira kukuru, kunyanya munyika ye e-commerce. Nekudaro, muna 2019, isu tichakwanisa kutora bot kune imwe nhanho nekuwedzera kwevhidhiyo bots. Varipo kuti vabatsire mabatiro evatengi, kutengesa uye kushambadzira. Izvo zvakatodarika izvo nekushanduka kwenzira yekutengesa.
Apo vateereri vachashanyira a Website, zvinouya semukana wakakura wekusangana navo. Asi pane dzimwe nguva pavanovhara bhokisi rekukurukura vasina kupa misoro kwariri. Dambudziko iri rinogadziriswa nevhidhiyo bot. ine simba rekukochekera kutarisisa kwetarisiro uye nekuishandura kuita lead. Vhidhiyo ine mukana iwoyo mairi uye haumboziva kuti inogona kupa mhinduro kumutengi. Izvi zvichaita kuti vateereri vasarudze mamwe mashoko pasina kutambisa sekondi.
Nei Vhidhiyo Bheti iri ramangwana
Iko hapana mubvunzo kuti vhidhiyo bot iri kubata kubata kutarisisa pane yakafara chimiro. Kunyangwe muchikamu chekuyedza, yatora vateveri vazhinji vanotevera uye kunyange makambani ari kuuya nemifungo yakadaro. Iyi sisitimu iri kubvisa izvo zvinodiwa zvekunyemwerera uye kufona. Pane kudaro, inopa mukana wekurega meseji iite rese basa uye iine chaiyo-nguva-demo. Pane zvinhu zvishoma zvinokundwa nerubatsiro rwevideo bots.
1. Chinja mukutarisira kwevatengi
Vatengi izvozvi vakagadzirira kupfuura kuona zvauri kuvapa. Pamusoro pe izvozvo, smart technology inobvumira mutengi kuongorora sarudzo dzawo. Nekudaro, zvave kuve zvakaoma kuti vatore pfungwa yavo panguva imwechete munyika yakatsauka. Ivo havadi kumirira uye kuda sarudzo iyo yavanowanikwa kwavari panguva yega beck uye kufona. Nekudaro, kunouya bot.
Ivo vane kugona kuvepo kwemutengi kutenderera nguva zvichienderana nezvinodiwa zvavo uye kugutsa. Nerubatsiro rwevhidhiyo bot, mumwe haafanire kuronga demo yechigadzirwa kana sevhisi pakati pehusiku. Vatengi vanogona kungoongorora chaiyo vhidhiyo kuti basa riitwe. Pamusoro pe izvozvo, chakagadzirwa njere iri kushanda kuti riwedzere kungwara kuitira kuti vagone kupindura mibvunzo yemutengi zviri nyore uye zvinobudirira pasina chinodiwa chebasa remaoko. Nekudaro, urwu rubatsiro rwuri kuramba ruchizivikanwa nekufamba kwenguva.
2. Natural Mutauro
Yakashandura kufambira mberi kweseti yese nyore nyore nekuwedzera kwehurongwa hwakangwara. Mutauro wechisikigo uri kuita nani nekufamba kwenguva. Zvakaita chatbots munguva yapfuura uye ikozvino vafambisa nhanho kumusoro nekuunzwa kwevhidhiyo bots. Pamusoro peizvi, nguva yakafanira iri kuvandudza zvakare maererano nehuwandu hwekutumira kuti ive nani kana zvasvika pakuchengeta ruzivo uye kugadzirisa mibvunzo.
3. Kurerukirwa kwekuvandudza uye kuendesa
Ehe, nekufambira mberi kwetekinoroji, makambani ari nyore kuuya nemazano akasiyana ekushandisa mavhidhiyo bots. Ivo vakasendamira pamusoro pekufamba chakagadzirwa njere kutevera mhinduro yakanakisisa. Zvakare, AI yakaita kuti zvibvire kuti isu hatifanirwe kudzima iyo yese bot yekumisikidzwa maitiro. Zviri nyore kugadzira uye kuendesa pane iyo Website pakushanda kuzadzisa zvinangwa.
4. Kutengesa kwakasarudzika
Zvakanaka, vhidhiyo bots iri kuvhara zvese kuita kuti mushandisi anzwe motto yayo. Inoshanda uye inoongorora iyo data iyo kambani inotofanira kuunza mhinduro yakanakisa. Zvakare, iyo data inounganidzwa uye inogadziridzwa kuitira kuvhara iyo yakakosha chikamu chekugadzirisa. Inogona kusimbisa nyore nyore kushandiswa kwedata nerubatsiro rwemutengi uye tarisiro yekuda. Ipapo ivo vanogona kutumira maemail nekuseta kwevhidhiyo bot kuti zviite nyore. Kamwe, vhidhiyo inonyorwa nemazvo nemaemail kana pane Website, vobva vatanga nenyaya yekufona.
5. Kutengesa kuri nyore uye kunoshanda
Mabhoti akaita kuti zvive nyore kutimu yekutengesa kukunda zvikanganiso zvakakura uye kushanda pakuzadzisa zvido. Izvo zvakare zviri kubatsira mukugadzirisa zvinotungamira uye kupindura mubvunzo unowanzo bvunzwa. Zvino, mufananidzo bot iyo inogona chaizvo kuratidza idzi mhinduro sedemo kuti iwedzere kunzwisisika. Ehe, izvi ndizvo zvichaitwa nevhidhiyo bot. Hofori dzakakura senge Facebook, Skype, dziri kushanda kuti zviite izvi. Unogona kufunga nezve bots semunhu chete asi vane zvakawanda zvoga zvebasa pachinzvimbo chekushanda nemaoko. Iyo data inoshandurwa zvinoenderana ne data iro rinochengetwa musystem. Ruyamuro urwu rwuri kushandisa zvese zvakakosheswa zviwanikwa nekuchengetedza yakawanda nguva.
Chatbots uye vhidhiyo bots havasi pano kutsiva mabasa evanhu. Vari kungoyedza kuita kuti basa rive nyore uye rishande kune kutengesa uye kushambadzira timu. Zvakare, ivo vari kuyedza kushandura iyo lead kuti ive mutengi nemazwi akakodzera uye hurukuro. Nerubatsiro rwe bots, isu tiri kungopedza kuomarara uye kubatsira mukuvandudza mhando yekutengesa.
Unoda rubatsiro neako chatbot kuitiswa? Taura nekutaurirana
Gwaro Rakazara reKuwedzera Lead Generation uye Shanduko Mareti